Aberdeen, स्कटल्याण्ड मा एक मोती | यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | Aberdeen, के हेर्ने
जब तपाईं बेलायतको यात्रा गर्न तयार हुनुहुन्छ, धेरै पटक तपाईं लन्डनमा एक्लै बस्न चाहनुहुन्न। विचार भनेको फाइदा लिन र यात्रा गर्नु हो। पाउन्ड यूरो भन्दा महँगो छ त्यसैले एक यात्रा मा तपाईं एक ढु with्गा संग धेरै पक्षी मार्न सक्नुहुन्छ।
जब तपाईं नक्शा देख्नुहुन्छ, तपाईंको टकटुक कुनै समयमा अवतरण हुनेछ स्कटल्याण्ड। एडिमुरगो सब भन्दा क्लासिक गन्तव्य हो तर यदि तपाईंले आफ्नो आँखा उठाउनुभयो, चिसो उत्तर तिर, तपाईं भिन्नता पाउनुहुनेछ Aberdeen। यो देशको तेस्रो सबसे अधिक जनसंख्या भएको शहर हो र यसलाई रूपले चिनिन्छ ग्रेनाइट शहर। किन फेला पार्नुहोस्।
1 Aberdeen, स्कटल्याण्ड मा गन्तव्य
2 Aberdeen मा कसरी पुग्ने
3 Aberdeen मा के हेर्ने
Aberdeen, स्कटल्याण्ड मा गन्तव्य
यदि तपाईंलाई स्कटिश ईतिहास मनपर्‍यो वा टाढा फालियो भने बहादुरउदाहरण को लागी, तपाइँ Aberdeen याद गर्न सक्नुहुन्न। स्कटल्याण्ड स्वतन्त्रताको लागि युद्धहरूको बखत यो अंग्रेजी नियन्त्रणमा थियो र यो प्रसिद्ध रोबर्ट डी ब्रुस थिए जो फिल्मको आधा भागमा वालेसको देशद्रोहीको रूपमा देखा परेका थिए जसले १ s०1308 मा यसलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पार्न, सबै अ English्ग्रेजीलाई मार्न र स्कट्समा फिर्ता ल्याउन महत्वपूर्ण घेरा हालेका थिए।
Aberdeen शान्त जीवन भनेको के छैन, साईटहरू, लडाईहरू र डरलाग्दो विपत्तिहरूको बीचमा यसले यसको जनसंख्या, दिवालिया र पुनर्संरचनाहरू डेमा गर्दछ। आज उनी आफूलाई जीवित रहेको व्यक्तिको रूपमा प्रस्तुत गर्छिन्। यो दुई नदी मुख बीचमा बासिएको छ, डन र डी, र धेरै रोलिंग पहाडहरूमा। तिम्रो मौसम कस्तो छ? त्यसो भए, यो जान्नका लागि केवल नक्सामा हेर्नुहोस् तिनीहरूको जाडो कठोर छ, धेरै घण्टा सूर्यको साथ।
डिसेम्बरमा जाँदा सावधान हुनुहोस् किनभने त्यस महिनाले २०१० मा -१º डिग्री सेल्सियसको साथ फ्रस्टको रेकर्ड तोकेको छ। ¿गर्मी सबै भन्दा राम्रो विकल्प हो? अवश्य पनि, तापक्रम २० डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा बढी हुन्छ र तातो गर्मीमा उनीहरू º० डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म पुग्न सक्दछन्। रिमोट एबरडीनका लागि खराब छैन।
Aberdeen मा कसरी पुग्ने
Aberdeen धेरै राम्रोसंग दुनिया संग जोडिएको छ: यसको आफ्नै अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, फेरी टर्मिनल र बस स्टेशन छ। कार द्वारा तपाईं एडिनबर्ग वा ग्लासगो बाट मात्र दुई र आधा घन्टा मा हुनुहुन्छ।
लन्डनबाट तपाईं एक रेल सेवा लिन सक्नुहुन्छ भर्जिन ईस्ट कोस्टबाट जुन किंग क्रस स्टेशनबाट छुट्छ र करीव सात र एक चौथाई घण्टा लिन्छ। ट्रेनहरू प्रत्येक चार घण्टामा छुट्छन्। त्यहाँ एक द्रुत सेवा छ तर तपाइँ एडिनबर्ग (एडिनबर्ग हाईमार्केट स्टेशन) मा जडान गर्नु पर्छ। गत वर्ष यो सेवा को लागी दरहरु लगभग p० पाउन्ड थिए।
लन्डनबाट अर्को विकल्प हो क्यालेडोनियन स्लीपर जुन लन्डन ईस्टनबाट बेलुकी :9: १ at बजे छुट्छ र बिहान :15: .० बजे एबरडीनमा आइपुग्छ। यो कुनै पनि खराब होइन र केबिनको लागि साझा बाunk्गको साथ तपाईंले लगभग £ १०० तिर्नुहुन्छ। तपाईंले दिमागमा लिनुपर्दछ कि सबैभन्दा सुविधाजनक दरहरू जहिले पनि भेटिन्छ जब तपाईं बुक र अग्रिम भुक्तानी गर्नुहुन्छ। राउन्डट्रिप टिकटहरू पनि प्राय सस्ता हुन्छन् त्यसैले दिमागमा राख्नुहोस्।
त्यहाँ फर्स्ट क्लासको लागि पनि अफरहरू छन् त्यसैले उनीहरूलाई खोज्नुहोस् किनभने सबै पछि यात्रा छोटो छैन, तपाइँ जुनसुकै ट्रेन लिनुहोस्।
मार्गहरूको बारेमा लन्डनबाट बसमा यात्रा को लागी १२ देखि १ 12 घण्टा लाग्छ। बसहरू भिक्टोरिया कोच स्टेशनबाट दिनको दुई पटक बिहान र साँझ छुट्छन्। तपाइँसँग बिहान 8 बजेको बस छ, उदाहरणको लागि, र रातको १०::10० सेवा। यस अवस्थामा यात्राले दुई घण्टा कम, कम वा कम लिन्छ। पछिल्लो वर्ष दर २० पाउन्डबाट शुरू भयो। स्पष्ट रूपमा, तपाईं नेशनल एक्सप्रेस कोच वेबसाइटमा अनलाइन टिकट किन्न सक्नुहुनेछ।
यदि तपाईं ड्राइभ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईं कार भाँडामा लिन सक्नुहुन्छ र आफैंमा यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ धेरै मोटरवेहरू छन् जो लन्डनलाई एबरडीन वा एडिनबर्गसँग एबरडीन जोड्दछ। तर के हुन्छ यदि तपाईं स्कटल्यान्डमा हुनुहुन्छ? ग्लासगो र एडिनबर्गबाट ​​तपाईं त्यहाँ रेलमा पुग्न सक्नुहुनेछन्यूकासल र योर्कबाट पनि। को सेवाहरु खोज्नुहोस् स्कट्रेल.
मैले माथि भनें, एबरडीनको जेमीसेनको क्वेमा रेल स्टेशनको ठीक छेउमा अवस्थित फेरी टर्मिनल छ। टर्मिनलबाट स्कटिश टापुहरू, शेटल्याण्ड र ओर्कनेमा पुग्ने डुries्गाहरू।
Aberdeen मा के हेर्ने
तपाईंले पहिले त्यो भन्नु पर्छ Aberdeenshire, काउन्टी, स्कटिश क्यासल काउन्टी को रूप मा परिचित छ र त्यो किनभने यस भागले मध्य यूके भर मा एकर मध्यकालीन महलको अधिकतम रकम केन्द्रित गर्दछ। त्यसोभए, कुन कुरा याद गर्न चाहानुहुन्न भन्ने कुरा राम्रोसँग चयन गर्न! तपाईका लागि साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ Sctoland को मात्र समर्पित ट्रेल बाल्मोरल क्यासल, क्रथेस क्यासल, ड्रम क्यासल, डन्नेटर महल वा हन्टली सहित १ cast महलहरू समावेश छन्।
El बालमोरल महल यो शाही निवास हो जब रानी एलिजाबेथ द्वितीय स्कटल्याण्ड मा पैदल वा छुट्टी मा छ। यो १ 2017 औं शताब्दीको अन्त्य हो र भिक्टोरियाको शासनको दौडान क्राउनद्वारा अधिग्रहण गरिएको थियो। यस २०१ 1 बगैंचा, क्याफेटेरिया, प्रदर्शनी कोठाहरू र स्टोर पनि अप्रिल १ र जुलाई 31१ बिहान बिहान १० देखि साँझ 10 बिहान छुट्टीमा खुला रहनेछ।
प्रवेश £ ११.11० हो र पार्कि,, बगैंचा र बगैचामा पहुँच, अस्तबलमा प्रदर्शनी क्षेत्र र महलको भोज हल समावेश गर्दछ। यसले अडियो गाईड समावेश गर्दछ। यो Aberdeen बाट मात्र एक घण्टा भन्दा टाढा छ र ट्याक्सी वा बस बाट पुग्न सकिन्छ। वा टुरमा पक्कै पनि।
बालमोरल बाहिर, अरू कुन महलहरू सिफारिस गरिन्छ? को महल क्र्याशहरू यो एक छ टावरहाउस धेरै क्लासिक, सुन्दर बगैंचाले घेरिएको। भित्र एन्टिक फर्निचर, परिवार पोर्ट्रेट होल्डरहरू र धेरै इतिहासहरू छन्। यो बिहान १०::10० देखि साँझ 30 सम्म खुल्छ र प्रवेश शुल्क £ १२. .० हुन्छ। को ड्रम क्यासल यो सात शताब्दी पुरानो छ र टावर र जsts्गल १ 1323२XNUMX मा रोबर्ट डि ब्रुसको परिवारलाई दिइयो।
आज यसमा जैकोबाइट र भिक्टोरियन क्षेत्रहरू छन् र पछि गुलाबको सुन्दर ऐतिहासिक बगैंचा सत्रहौं र बीसौं शताब्दीको बीचमा खेती गरियो। यसले बिहान ११ बजे यसको ढोका खोल्छ र लागत £ १२. .०।
मैले भनें त्यहाँ त्यहाँ धेरै महलहरू छन् त्यसैले तपाईंले केवल कुन व्यक्ति भ्रमण गर्ने र टुर लिने छनौट गर्नुपर्नेछ। कहिलेकाँही टुर वा धेरैको लागि साइन अप गर्नु राम्रो हुन्छ, ताकि सबै भन्दा बढिलाई हराउँदैन। अर्कोतर्फ, स्कटल्यान्ड ह्विस्कीका लागि परिचित छ। स्थानीय पानी, जौ बाली र हावाको गुणस्तरले यस आत्माको गुणस्तरलाई उत्कृष्ट बनाउँछ। Scotch व्हिस्की पत्ता लगाउन गर्न सक्नुहुन्छ Aberdeenshire को गुप्त माल्ट्स.
पैदल यात्रा ले तपाईंलाई १ dis औं र १ th औं शताब्दी पछिका विभिन्न डिस्टिलरीहरू पुर्‍याउँछ जुन विभिन्न रमणीय गाउँहरू जस्तै ग्लेनड्रोनाच, अर्डमोर वा फेट्टरकेर्नमा अवस्थित छ। यी भ्रमणहरू मूलभूतदेखि विशेषसम्म, जब तपाईं ह्विस्की अम्मल हुनुहुन्छ उत्तम हुन्छ। धेरै स्कटिश डिस्टिलरीहरूले पुरानो आसवन प्रविधिहरू राख्छन् र तपाईंलाई प्रक्रिया यती नै राम्रो देखाउँदछ। सबै भन्दा प्रसिद्ध डिस्टिलरीहरू ती हुन् Glenfiddich, Chivas Regal, McCallan र The Glenlivet.
अन्तिम तर कम्तिमा शहरी लेआउट छैन एबरडीन: दुई ऐतिहासिक केन्द्रहरू छन्, the पुरानो Aberdeen यसको कब्बल सडकहरू र १tified औं शताब्दीको क्याथेड्रलको साथ र फुटडी, सानो घर, फूल बगैचा र रंगीन घरहरूको साथ समुद्रीतटमा ठीक माछा मार्ने जिल्ला। तपाईं मुख्य सडकबाट तल जान सक्नुहुन्छ संघीय स्ट्रीट, एवेन्यू जुन खैरो ग्रेनाइट (यसैले ग्रेनाइट शहरको नाम) मा बनेको भवनहरूसँग लाइन लगाइएको छ, समुद्र तटमा हिंड्न वा गर्नुहोस् प्याडल बोर्ड यदि मौसम राम्रो छ।
को सुनहरी बालुवा समुद्र तटहरू माईल को लागी तन्नु, त्यहाँ छन् धेरै टिब्बा, सँधै उत्तरमा, जबकि दक्षिण मा उडान र आश्चर्यजनक स्थित छन् चट्टानहरु। अन्तमा, सँग फोटो विलियम वालेस मूर्ति तपाईको स्क्र्यापबुकबाट हराउन सक्दैन। तपाईंले यसलाई रोजमउन्ट वायाडक्ट र युनियन टेरेसको जंक्शनमा पाउनुहुन्छ। त्यहाँ अर्का एक चर्चित स्कटिश लेखक रबर्ट बर्न्स र अर्को ब्रॉड स्ट्रीटमा रोबर्ट डि ब्रुसको हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » शहरहरू » Aberdeen » Aberdeen, स्कटल्याण्ड मा एक मोती